आम हड्तालको निरीक्षण गर्न स्कुटीमै निस्किए माधवकुमार नेपाल – नेपाली सूर्य
आम हड्तालको निरीक्षण गर्न स्कुटीमै निस्किए माधवकुमार नेपाल
February 4, 2021 Nepali SuryaLeaveaComment on आम हड्तालको निरीक्षण गर्न स्कुटीमै निस्किए माधवकुमार नेपाल
बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदीय सुनुवाईविनै संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु नियुक्त गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहले आम हड्तालको घोषणा गरेको थियो। nagariknews
कतिपय तपाईं हामी झट्ट टेलिभिजनको रियालिटी शो वा फेसबुक, टिकटक र युट्युबमा साना बालबालिकाको कुनै प्रतिभा देखेर आफ्ना सन्तान पनि त्यस्तै हुन् भन्ने चाहान्छौ । स्क्रिनमा देखिएका बालबालिकाको प्रतिभा आफ्ना सन्तान पनि होस् भनेर चाहानु आफैमा खराब होइन । तर अधिकांश अभिभावक आफ्ना सन्तानलाई उनिहरुसंग तुलना गरेर दबाब दिने गर्दछन् । जसको कारण धेरै बालबालिकका अभिभावकै कारणले यस प्रकारको तनाव भोग्न बाध्य हुने गरेका छन् । यस प्रकारको समस्या अहिले हाम्रो समाजमा व्याप्त छ ।
यतिमात्र होइन, अभिभावकको अस्वभाविक हठका कारण बालबालिकामा पर्ने अर्काे समस्या भनेको पढाईमा दिइने दबाब हो । आफ्नो सन्तान अरु बालबालिका झै परीक्षामा प्रथम होस्, खेलकुदमा मेडल ल्याउने गरीको अब्बल होस् र नाच्न गाउने क्षमता राखोस् भनेर अभिभावकले उनिहरुलाई त्यसकालागी दबाब दिने गरेका छन् । तर किताबी अक्षर घोकेर उत्तरपुस्तिकामा लेखेकै भरमा जाचिँने बालबालिकाको क्षमता र त्यसकालागी दिइने अभिभावकको दबाब कति हदसम्म उचित होला ?
यो हरेक आमाबुवाले सोच्नु पर्ने हुन्छ । पढ्नु आफैमा रुचि भएपछि गर्न सकिने एक कार्य हो । केबल किताबी ज्ञानले मात्र उसको मुल्यांकन हुन सक्दैन । यसकालागी रुची महत्वपुर्ण हुन्छ । बच्चा परीक्षामा प्रथम नहुदैमा वा उसले अरु सरह कुनै प्रतिभा वा क्षमता नराख्दैमा उ कमजोर हुदैन । उसमा कुन बिषयमा रुची छ वा उसको कुन बिषयतर्फ लगाव छ त्यो खोज्न अभिभावकले जरुरी छ । त्यसैले कुनै बच्चामा देखेको केहि मिनेटको अद्धितीय क्षमता वा प्रतिभामा योग्य बनुन् भनेर बालबालिकालाई दबाब दिइरहनु हुदैन ।
आजभन्दा करीब १ दशक अगाडीसम्म बालबालिकाहरुको खेल्ने साधन भनेको खेलौना थिए । उनिहरु विद्यालयबाट फर्केपछि घण्टौसम्म आगन वा चौरमा बिभिन्न खेल खेल्दथे । धेरैसंग हेलमेल हुने गर्दथे । त्यसबेला उनिहरुको रुची पढाई संगसंगै बिभिन्न खेलहरुमा हुने गर्दथ्यो । तर पछिल्लो समयमा बढ्दो प्रविधीका कारण बालबालिका खेलौनाबाट टाढिएका छन् । अहिले अधिकाशं बालबालिकाहरुको खेल्ने वा समय बिताउने साधन भनेको मोवाइल बन्न पुगेको छ ।
उनिहरु मोवाइलको स्क्रिनमा पुरै संसार रहेको मान्दछन् । त्यसैले कतिपय बालबालिका खाना खादा होस् वा सुत्ने वा उठ्ने बित्तिकै मोवाइल समाउन पुग्दछन् । उनीहरु पाठ्यपुस्तकमा भन्दा मोवाइल, ल्यापटप र ट्याबमा रमाउन थालेका छन् । अझ अभिभावक समेत आफ्नो काममा बाधा नपुर्याउन् भनेर स्वयम् बालबालिकालाई मोवाइल दिने गर्दछन् । यसरी अहिले डिटिजल स्मार्टफोन नै बालबालिकाले एउटा दुनियाँ बनेको छ । पहिले कुनै बिषयको जिज्ञाशा वा कौतुहलता मेटाउन बालबालिका आफ्ना आमाबुवा वा शिक्षकसंग प्रश्न गर्दथे । तर अहिले समय त्यस्तो छैन ।
अहिलेका बालबालिकामा कौतुहलता मेट्न पर्खिने धैर्यता छैन । उनीहरु कुनै बिषयको जिज्ञाशा हुनासाथ डिजिटल प्रविधीमा डुल्दछन् । त्यसैले चाहे खेल्न होस् वा कुनै बिषयमा ज्ञान हासिल गर्न बालबालिकाको आशक्ति मोवाइल प्रति बढ्दो छ । मोवाइलको प्रयोगबाट हुने स्वास्थ्यका हानीबा बिषयमा धेरै शोध र अनुसन्धानबाट बिभिन्न नतिजाहरु सार्वजनिक भएका छन् । मोवाइलमा रमाउने बालबालिकामा आँखाको समस्यादेखि मोटोपनसम्मका बिभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखापर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
यस्तोमा अहिलेको अभिभावकको मूख्य समस्या भनेको आफ्ना बच्चालाई कसरी मोवाइलबाट टाढा राख्ने भन्ने हुदे गर्दछ । बच्चालाई मोवाइलबाट टाढा राख्न हर्काने, गाली गर्ने वा पिटेर हुदैन । यसकालागी उनिहरुलाई केहि निश्चित समय छुट्याउन सकिन्छ । फकाइफुल्याइ वा सम्झाइबुझाइ उनिहरुलाई बिस्तारै मोवाइलबाट अलग्याउनु पर्दछ । उनिहरुको रुची अनुसारको अन्य काम, पढाइ र बाहिरी खेलप्रति प्रेरित गर्नुपर्छ ।
मेरो बुझाईमा मोवाइलको लत छुटाउने सबैभन्दा सहज उपाय भनेको अभिभावकले आफ्ना सन्तानसंग प्रसस्त समय बिताउनु पर्दछ । मेरी छोरी कियानीमा पनि केहि अघिसम्म मोवाइलको लत बढ्दो थियो । त्यसैले मैले उसको ध्यान मोवाइलबाट हटाउन उसंग बढिभन्दा बढि समय बिताउन थाले । उसका कुरा सुन्न, उसंग खेल्न र उसंग बसेर पढ्न र चित्र कोर्न थाले ।
जसका कारण बिस्तारै उसको मोवाइलप्रतिको आशक्ति कम हुदैं गएको छ । समग्रमा हरेक अभिभावकले बालबालिकको रुची बुझेर उसंग प्रसस्त समय बिताउन आवश्यक छ । यसबाट उसको भावना बुझ्न, उसको विश्वास जित्न र आफ्नो कुरा उसलाई बुझाउन सहज हुन्छ ।
तसर्थ कुनै पनि स्क्रिनमा देखिएका अन्य बालबालिकासंग उनिहरुको तुलना गर्ने र त्यसकालागी अभिभावकले दबाब दिने काम बन्द गर्नु पर्दछ । साथै बालबालिकालाई सकेसम्म मोवाइलभन्दा बाहिरी बातावरणतर्फ उसको ध्यान केन्द्रित गराउनु पर्दछ ।
भोलि २३ गते ओली समूहले बन्द गर्ने !
यस्तो स्थितिमा ओलीले सरकार छोड्ने !